Maitiro Ekuita Zvakakwana SEO Kuongorora | Martech Zone
Vhiki rino rapfuura, mumwe wandaishanda naye anga ataura kuti aive nemutengi aitaridzika kuve rakanamatira mumatanho uye aida an SEO kuongorora zvesaiti kuti uone kana paine chero nyaya.
Kwemakore, injini dzekutsvaga dzakashanduka kusvika padanho rekuti zvishandiso zvekare zvekuongorora saiti hazvichanyatso batsira. Muchokwadi, anga ave makore masere kubvira ndatsamwisa chaizvo masangano ekutsvaga uye vanachipangamazano nekutaura SEO yakanga yafa. Ipo chinyorwa chikave chakadzvanywa, ini ndinomira pamberi. Tsvaga injini injini dzehunhu zvechokwadi, kwete chete zvinokambaira zvinoongorora mabheti uye mawebhusaiti enzvimbo yako.
Kutsvaga kweinjini yekutsvaga kunoenderana nematanho mana akakosha:
Zvako zvirimo - kunyatso kuronga, kupa, uye kusimudzira zvemukati uye gonesa yako yemukati manejimendi system kutsvaga injini dzekukamba uye kuziva kuti yako saiti iri nezvei.
Simba rako - sei yako domain kana bhizinesi rinosimudzirwa pane mamwe masayiti akakodzera ayo majini ekutsvaga anokwanisa kugaya nekuziva kutendeseka kwako uye chiremera kubva.
Vakwikwidzi vako - urikungoenda pachinhanho uye kukwikwidza kwako kuchikubvumidza iwe, saka kunzwisisa zviri kuitwa nevakwikwidzi zvinovaita kuti varambe vachikwirwa kwakakosha mukubudirira kwako.
Vako vashanyi - mitsva yekutsvaga injini yakanyanya kuenderana nemaitiro emushanyi wako. Nekudaro, iwe unofanirwa kupa chinogombedzera, chinobatanidza zano rese rekugovaniswa, kukwidziridzwa, uye kuti vashanyi varambe vachiratidzwa newe mumhedzisiro yavo. Izvi zvinogona kuve zvichienderana nenzvimbo, chishandiso, mwaka, nezvimwe. Kugadziridza hunhu hwevanhu kunoguma nemhedzisiro yekuonekwa kwakanyanya.
Sezvauri kuona, izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuita toni yekutsvagisa… kubva pawebhusaiti coding uye kuita kune kukwikwidza kutsvagisa, kune inoenderera kuongorora, kurekodha uye kuongorora pa-peji revashanyi maitiro.
Kana nyanzvi dzekutsvaga dzichiita ongororo yeSEO, hazviwanzo batanidza zvese izvi zvinhu mukuongorora kwavo kwese. Vazhinji vari kungo taura nekuita yakakosha yehunyanzvi SEO odhita yezvinhu zvepaiti.
Kuongorora kunoitika Pakarepo, SEO Haisi
Pandinotsanangura SEO kune mutengi, ini ndinowanzo govana fananidzo yechikepe chinoyambuka gungwa. Nepo chikepe chingave chiri muchimiro chakakwana chekushanda uye chakananga munzira kwayo, dambudziko nderekuti pane zvimwe zvikepe zvinogona kukurumidza uye zvirinani… uye mafungu nemhepo zvealgorithms zvinogona kuvafarira.
Ongororo yeSEO inotora chinyorwa munguva kuti ikuratidze zvauri kuita, zvauri kuita uchikwikwidza vakwikwidzi, uye nemabatiro auri kuita zvine chekuita neinjini yekutsvaga. Kuti ma Audits ashande, unofanirwa kuenderera uchimhanya uye kuongorora mashandiro edomain yako ... kwete kungofunga kuti ndiyo yakamisikidzwa uye kanganwa nzira yacho.
SE Chinzvimbo Webhusaiti Kuongorora
Chishandiso chimwe kunze uko chichaitira izvi kukurumidza kutarisa kwauri SE Rankings's Audit Chishandiso. Icho chishandiso chakazara chekuongorora chinogona kurongwa uye kukupa iwe yakatarwa mishumo kuti ikubatsire kugadzirisa uye kugadzirisa yako yekutsvaga injini kuoneka uye chinzvimbo.
The SE Chinzvimbo Chekuongorora inoongorora ichipesana neese akakosha enjini yekumisikidza parameter:
Zvikanganiso zvehunyanzvi - Ita shuwa kuti ako canonical uye hreflang ma tag akaiswa nenzira kwayo, tarisa redirect masetingi, uye tsvaga zvakapetwa mapeji. Pamusoro peizvozvo, ongorora mapeji ane 3xx, 4xx, uye 5xx mamiriro emakhodhi, pamwe neaya akavharirwa ne robots.txt kana akanyorwa neiyo noindex tag.
Meta Tags uye Misoro - Tsvaga mapeji asina kana meta tag meta. Kugadzira rakanakisa zita uye rondedzero tag kureba pakupedzisira kunokutendera kuti uone mateki akareba kana akapfupika.
Webhusaiti Kurodha Kumhanyisa - Tarisa kuti webhusaiti inokurumidza sei kutakura pane nharembozha uye mabhurawuza eInternet uye, kana zvichitora nguva yakareba, tora Google kurudziro yekuti ungaigadzirise sei.
Image Analysis - Skena zvifananidzo zvese pawebhusaiti uye uone kana paine arikushaya alt tag kana ane 404 kukanganisa. Uyezve, tsvaga kana chero mifananidzo yakakura kwazvo uye, semhedzisiro, dzosera pasi saiti yekumhanyisa kumhanya.
Yemukati Zvinongedzo - Tsvaga kuti mangani emukati maratidziro aripo pane webhusaiti, kwavanobva, uye mapeji ekuenda, pamwe nekunge kana kwete iine isina chinhu tag. Kuziva kuti zvemukati zvinongedzo zvinopararira sei saiti zvinobatsira iwe kuzvivandudza.
Chishandiso hachiregedze kutsvagisa saiti yako, zvakare inosanganisira zvese analytics nedata reGoogle Tsvaga koni mune iyo yose odhita kukupa iwe mushumo wakajeka wesaiti yako, kunyatsoita pamatanho emazwi aunoda kuverengerana nawo, zvakare sekuita kwauri kuita uchikwikwidza nevanokwikwidza.
SE chinzvimbo chikuva chakazara uye chinobvumidza varidzi vewebhusaiti kudzora zvese zvecrawl pamwe naWhitelabel marepoti kana iwe uri SEO chipangamazano kana agency:
Automated yakarongwa mishumo uye rechecks zvinokutendera iwe kuti uchengete webhusaiti yako pasi pekugara uchiongororwa.
SE Rankings's bot inogona kusaremekedza mirawo kubva kumarobhoti.txt, tevera marongero e URL, kana kungo teedzera yako tsika tsika.
Tongedza yako webhusaiti yekuongorora webhusaiti: wedzera logo, nyora zvirevo, uye uzviite yako sezvazvinogona.
Iwe unokwanisa kutsanangura izvo zvinofanirwa kurapwa sekukanganisa.
Tanga 14-Mazuva Yemahara Muedzo weSE Chinzvimbo
Dhawunorodha muyenzaniso PDF mushumo:
Alexa akagovana iyi infographic, Yehunyanzvi SEO Ongororo Yevatangi, iyo inonongedzera ku21 nyaya muzvikamu gumi - zvese izvo zvaunowana mune iyo SEO Chinzvimbo Chekuongorora chishandiso:
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu SE chinzvimbo affiliate link mune ino chinyorwa.
Tags: Alexa seo odhitaAmazonamazon alexayemakwikwi odhitakeyword analysiskeyword toolkumhara peji odhitapeji kumhanyisa kuongororapdf saiti odhitayekutsvaga injini yekuongororayekutsvaga injini yekuongororaseo odhitasaiti odhita
webhusaiti odhita services
Jun 28, 2015 pa8: 22AM
Great ruzivo saiti maturusi. Uku ndiko kubudirira kunyanya kune vanotanga.